Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1401
CRAAM Ankatso : nizara ny « Silogik » tamin’ireo mpianatra i Silo
Par Taratra sur 14/04/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Tsy misy mitovy ny fiakarana an-tsehatra rehetra ho an’i Silo. Tsy fampisehoana fotsiny, fa fiarahana, fifampizarana mihitsy no niarahany tamin’ireo mpianatra sy ireo mpankafy, teny amin’ny CRAAM Ankatso, omaly tolakandro. Nilomano tao anatin’ny kanto ny rehetra, araka ny efa nanampoizana azy. Nitondra indray ny “Silogik”, izay naka endrika anjoria an-kira i Silo nandritra ny fiarahana. […]
“Golden Center” : Behoririka Mila ravaina ireo rindrina mavesatra
Par Taratra sur 14/04/2016 Divers, NS Malagasy
Tsy maintsy ravaina ireo rindrina mavesatra mety hitera-doza ho an’ny mpivarotra sy ny mpanjifa ao amin’ny trano fivarotana Golden Center’ etsy Behoririka. Tsy tokony hivoha ny tsena raha tanteraka izany raha ny tatitry ny teknisianina nanao ny fitsirihana. Taorian’ny fahamaizan’ity tranombarotra ity, nisy ny fitsirihana ara-teknika indroa natao tao an-toerana. Ny voalohany, nataon-dRabenimanana Armand, ary […]
Kolontsaina sy fanabeazana : nodimandry Rahaingoson Henri (DI…)
Hatairana… Alahelo… Ranomaso ! Lavo ilay andrarezina ny tontolon’ny kolontsaina sy ny fanabeazana. Zary kamboty ny habaky ny soratra sy ny asa fikarohana. Nodimandry omaly Rahaingoson Henri. « Andrianiko ny teniko, ny an’ny hafa koa feheziko ». Teny filamatra nanetsika indray ilay hambom-po hitia sy hikajy ary hanolokolo ny teny malagasy. Rahaingoson Henri na i « DI… » no loharano […]
Mialohan’ny fitetezam-paritra : hitondra « Salegy-awoee » ry Fandrama
Handeha hitety faritra ny tarika Fandrama… Mialoha izay, hampitotorebika ny mpankafy azy eto an-dRenivohitra ity tarika manana ny mampiavaka azy ity, ny asabotsy 16 avrily izao, eny amin’ny Jao’s Pub Ambohipo. Hanomboka amin’ny 9 ora alina hatramin’ny mandra-maraina, ao anatin’ny hafanana tanteraka ny fiarahany amin’ny mpankafy. « Isan-taona izahay no mamarana ny Festival Donia. Aorian’izay, raikitra […]
Tapany avaratra : hitondra orambe sy rivotra i Fantala
Na tombanana tsy hiditra an-tanety aza ilay rivodoza Fatala izay mihamitombo hery hatrany tao anatin’ny roa andro nanaraha-maso azy, hitondra ora-mikija sy rivo-mahery izy ho an’ny morontsiraka avaratra iray manontolo, hoy ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, omaly. Tany amin’ny 1 860 km atsinanan’i Vohemar no nisy ny foibeny, omaly, maraina tamin’ny 9 ora. […]
Mpianatra ho mpitsabo : mangataka ny hampiakarana 50% ny présalaire ny interne
Mangataka ny hampiakarana 50% ny karama ireo mpianatra interne ireo, satria tsy mifanaraka amin’ny vidim-piainana intsony. Manaraka ny fampiharana ny asa fara fahakeliny eny anivon’ny CSB sy ny hopitaly ny interne 7ème sy 8ème année ary ny interne qualifiant manerana ny Nosy, araka ny fampitam-baovao nataon’ny mpitondra tenin’izy ireo, Velonosy Venal. Ireo mpianatra ho mpitsabo […]
Zaka tsara : maika (t)sy faingana…
Inona no antenain’ny sarambabem-bahoaka amin’izao toe-draharaham-pirenena izao. Matoa mitranga izao, efa nisy fototra sy antony teo aloha… Tsy tongatonga ho azy, ahina mbola hiverina raha tsy milamina tanteraka. Ny mahavalalanina sy mahafanina ny vahoaka, hazakazaka arahin-tosika ny raharaha. Toy ny hoe izao vao tena hatrehina ny fanarenam-pirenena izay ela izay. Na ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka, […]
Toliara : nijoro ny fikambanana hilaza ny fahantrana
Par Taratra sur 14/04/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Vahaolana hafa mihitsy, manoloana ny olana eto amin’ny firenena. “Efa nisy ny fahantrana eto amintsika ary hatramin’ny fahagola. Izao kosa vao misy ny tanora mahatsapa ny haratsian’izany ary vonona hitondra ny soso-kevitra hanatsarana ny fiainan’ny vahoaka”, hoy ireo avy amin’ny fikambanana hilaza ny fahantrana, ny alatsinainy teo, tao Tsimenatse, Toliara, nanoloana ny mpanao gazety. Nohamafisin’izy […]
Tsy mandeha ny raharaham-pirenena : mitaky fifidianana mialoha ny fotoana ny Jly Camille Vital
Manamafy ny nambaran’ny antoko Malagasy miara-miainga koa. « Manana adidy amin’ny hanarenana ny firenena izahay ka anisan’izany ny tokony hirosoana amin’ny fifidianana filoham-pirenena mialoha ny fotoana. Tsy mandeha amin’ny laoniny intsony ny fiainam-pirenena ary latsaka an-katerena tanteraka. Tsy misy ny filaminana sy fandriampahalemana ary mijaly sy mahantra ny vahoaka », hoy ny Jly Camille Vital, tamin’ny resaka nifanaovana […]
Vita ny famindram-pahefana… Nilaza ny Praiminisitra teo aloha, Ravelonarivo, fa nahavita ny asany izy. “Ny tenako izay mandeha, efa nahavita ary nanao ny aiko tsy ho zavatra tamin’ny rehetra nokasaina. Ny vokany, mijery azy isika tsirairay”, hoy ny Praiminisitra teo aloha, Ravelonarivo Jean, tamin’ny famindram-pahefana teo aminy sy ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier, teny Mahazoarivo, […]
Zavamaniry vaovao : tsy ilana siramamy intsony ny fampiasana ny stevia
Par Taratra sur 14/04/2016 Economie, NS Malagasy
Misy zavamaniry vaovao, ambolena any Brickaville, voalaza fa azo itsaboana ny diabeta. Tsy hita eny an-tsena anefa fa natokan’ny mpamboly azy haondrana any ivelany. Misy karazan-javamaniry vaovao, nohafarana tany Sina, antsoina hoe stevia, ambolena any amin’ny kaominina Savalaina, distrikan’i Brickaville. Voalaza fa mahasolo siramamy sy azo iadiana amin’ny aretina diabeta ity zavamaniry ity, volena amina […]
Solontenan’ny Vondrona afrikanina, Youssouf Hawa : « Mila manaiky ny fanovana isika hialana amin’ny gaboraraka »
Hentitra ary nahitsy. « Manohana tanteraka ny kaominina Antananarivo Renivohitra amin’ny vinan’asa eny am-potony tontosainareo izahay. Vonona ny hanampy ny vahoaka Malagasy koa. Na izany aza, mila fiaraha-miasa avy amin’ny vahoaka hanaiky ny fiovana atolotry ny ben’ny Tanàna, ialana amin’ny gaboraraka », hoy ny solontenan’ny Vondrona afrikanina (UA), Ahmed Youssouf Hawa, omaly raha noraisin’ny ben’ny Tanànan’Antananarivo, […]
Ndriandahy Mahamoudou : “Mila mandray an-tanana ny ady amin’ny kolikoly ny fitondrana foibe”
Mby aiza ny ady amin’ny kolikoly? Maneho ny fijeriny ny tonia mpanatanteraka ny firaisamonina sivily Voifiraisana/PFNOSCM, Ndriandahy Mahamoudou: “Raha tiana hahomby ny ady amin’ny kolikoly, mila mandray an-tanana izany ny fitondram-panjakana foibe. Manana ny fahefana rehetra ilaina amin’izany izy.” Dinidinika… Gazety Taratra (*): Ahoana ny fijerinao ny hoe tany tan-dalàna amin’ny fisian’ny fitsaram-bahoaka etsy […]
Ramilijohn Toky : « Mila omena sehatra ny veterinera tanora »
Anisan’ny andrin’ny sehatry ny fiompiana ny fahasalaman’ny biby. Mitazona andraikitra goavana amin’izany ireo mpitsabo biby isan-tsokajiny. Ho fampivoarana sy hampandrosoana ity sehatra ity ary, naneho ny heviny Ramilijohn Toky, manampahaizana momba ny fitsaboana biby nianatra izay tany ivelany. « Mila sehatra tsara hampiharany ny fahaizana norantoviny ireo mpitsabo biby tanora, ankehitriny. Mila fiaraha-miasa sy fifampizarana traikefa […]
Fandraharahana iray manokana : mikatso ny varotra fiara efa niasa eto Antananarivo
Fandraharahana iray manokana ny varotra fiara efa niasa eto Antananarivo. Eo Analalely, Anosy, Andranobevava, azo sokajina ho tsena lehibe amin’ireo varotra fiara ireo. Betsaka amin’ireo ny avy any Eoropa, La Rénuion, efa niasa telo, dimy taona, nahavita 100.000 km raha ny salanisa. Saingy, tsy ahitana antontanisa mazava ny isan’izy ireo, firy marina ny miditra eto […]
Bazaribe Mananjary : trano ampolony indray kilan’ny afo
Par Taratra sur 14/04/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nijoalajoala tsy nisy toy izany ny afo vokatry ny haintrano nitranga tao Bazaribe Mananjary, omaly antoandro. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, omaly niainga avy ao amin’ny trano fivarotana iray ny afo ka niitatra tamin’ireo trano mifanila amin’ilay niantombohan’ny afo. Nisy tamin’ireo ny tranon’olon-tsotra, raha ny fanazavana hatrany. Hatramin’ny omaly, ampolony ireo trano kilan’ny afo. […]
Fiahiana ara-tsosialy : mitaky ny hamoahana ny lalàna vaovao ny mpiasa
Maromaro ny hetsika nataon’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana ara-tsosialy (Cnaps), ny herinandro lasa teo. Atrikasa niarahana tamin’ny mpitsara, ny mpanao gazety ary ny fiarahamonim-pirenena (OSC). Nahazo fiofanana koa ny solontenan’ny mpampiasa, ny delege sendikaly ary ny fanjakana mampiasa mpiasa tsy raikitra (ECD). Nahatratra 125 ny mpandray anjara. Nambaran’ny ben’ny Tanànan’ny kaominina Manorofify Toliara, isan’ny mpiofana […]
Ambatomitsangana Behoririka : lehilehy iray sady voaendaka no maty voatsatoka antsy
Handeha hiasa no nivoahana ny trano, kanjo sendra ny olon-dratsy. Notsatohan’ireto farany ny antsy ny lehilahy iray teny Ambatomitsangana, ka maty… Voatsatokantsy, ary maty rehefa tonga teny amin’ny hopitaly ny lehilahy iray sendra ny mpanendaka teny Ambatomitsangana Behoririka, omaly maraina tokony ho tamin’ny 5 ora teo. Sendra ny polisy nanao fisafoana koa anefa, tetsy andaniny, […]
Par Taratra sur 14/04/2016 En Bref, NS Malagasy
Nivadika ambony ambany ny fiara P 405 iray nentin’ny lehiben’ny “Centre securité routière” Morondava, ny 12 avrily lasa teo, tamin’ny 2 ora maraina. Araka ny vaovao avy amin’ny zandary, tsy mbola tafiditra ny fiolahana io fiara io no nivadika ambony ambany. Voalaza fa maty tsy tra-drano izy io vokatr’izany. Potika tanteraka ny fiara. Nalefa niakatra […]
Par Taratra sur 14/04/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Fanohizana ny raharaham-panjakana! Maromaro ny asa miandry ity governemanta vaovao tarihin’ny praiminisitra vaovao ity. Eo ny olana tsy manitsy vahana, ny tanjona tsy tratran’ny teo aloha, miampy ny asa andavanandro amin’ny maha fitantanan-draharaham-panjakana azy. Efa notaterina teto, fa azo adika ho anisan’ny antony tsy nanovana ny governemanta na ny mpikambana ao anatiny, taorian’ny fahavitan’ny fifidianana […]
Ambatondrazaka : manjaka ny dahalon-tany
Tsy ny asan-dahalo manerana ireo faritra mena ihany no isan’ny mampimenomenona ny olona amin’izao fotoana izao fa eo ihany koa ireo dahalon-tany izay tsikaritra fa mihamirongatra hatrany. Velon-taraina ny fianakaviana maromaro niharan’ny fisolokiana tany ao amin’ny fokontany Miaramanjaka, kaominina ambanivohitra Manakambahiny, distrikan’Ambatondrazaka. « Ny taona 1993 no nitrangan’izany tao an-toerana satria tany mirefy 500 ha mahery […]
Governemanta vaovao : raharaha mafana miandry ny afera andramena 30.000
Eo am-piandrasana izay ho mpikambana ao anatin’ny governemanta vaovao, anisan’ny raharaha mahakasika ny minisitra roa teo aloha ireo bolabola andramena 30.000 tratra tany Singapour.. Maromaro ny antontan-taratasy mahakasika azy ity. Niainga tany Toamasina ny 14 febroary 2014 ny sambo MV Oriental Pride, niditra ny fari-dranomasina any Singapour ny 28 febroary ary nampidirina tao amin’ny seranan-tsambon’i […]
Kaominina ambonivohitr’ i Toamasina : raikitra indray ny rotaka, ampolony naratra mafy
Par Taratra sur 14/04/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Tora-bato, daroka kibay… Raikitra indray, omaly ny fifandonana teo amin’ireo mpiasa mitokona, mbola tsy nahazo ny karamany sy ny olon’ny ben’ny Tanàna. Vokany, ampolony ireo naratra mafy. Efa ho fito volana izay no naharetan’ny olana ao amin’ity kaominina ambonivohitr’i Toamasina ity. Raha iverenana ny zava-nitranga tao Toamasina, omaly. Vao maraina toy ny mahazatra, tonga […]
Tany amin’ny 2254 km : mihaodihaody ny rivodoza Fatala
Par Taratra sur 13/04/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nivadika ho rivodoza ilay andian-drahona narahi-maso nanomboka ny faran’ny herinandro tao amin’ny ranomasina Indianina. Fatala no anarana malagasy nomena azy satria efa nahafeno ny fepetra. Nahitana fivoarana goavana izy tao anatin’ny 24 ora. Omaly tamin’ny 9 ora maraina, any amin’ny 2254 km atsinanan’Antsiranana no nisy ny foibeny. Nahatratra 75 km isan’ora ary tafiotra 105 km […]
Basikety : efa an-dalam-pahavitana ny “Kianja Firaisankina” eny 67 ha
Par Taratra sur 13/04/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Mitohy hatrany ny fampiroboroboana ny taranja basikety. Araka ny fantatra mantsy, hahazo kianja filalaovana vaovao ny eny 67 ha Avaratra Andrefana. Tohin’ilay tetikasan’ny filoham-pirenena, Rajanoarimampianina Hery, amin’ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena izany, taorian’ny fananganana ny Complexe sportive de Mahajanga, sy ny fanohanany ny fifaninanana nasionaly “Coupe du Président”. Efa eo an-dalam-pahavitana kosa ilay fotodrafitrasa nampitondraina ny […]
« Précédent 1 … 1 399 1 400 1 401 1 402 1 403 … 1 492 Suivant »